औषधि–उपचारमा कहिलेसम्म लुटिएको महसुस गरिरहने?
जेठ ६, २०७४ शनिवार २१:४२:०० प्रकाशित
उपचारका लागि अस्पताल पुगेका हरेक नेपालीको एउटा ‘क्रोनिक’ गुनासो हुनेगर्छ, ‘औषधि उपचार अचाक्ली महँगो।’
आफ्नो जीवन बचाइदिने डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि किन आक्रोशित हुन्छन् बिरामी? किन उनीहरु रोगमुक्त बनाएको गुन बिर्सेर लुटिएको महसुस गरेर फर्किन्छन्?
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई यिनै प्रश्न गरेका थियौं हामीले। उनको जवाफ थियो, ‘औषधि, ल्याव तथा रेडियोलोजीको अचाक्ली मूल्य, बिरामी अल्मल्याउने र मनपरी शुल्क लिने चलन।’
समस्या पत्ता लाग्यो, समाधान के त?
मन्त्री थापा भन्छन्, ‘महँगा औषधिको मूल्य नियन्त्रणले मात्र पनि करिब ५० प्रतिशत उपचार खर्च कम गर्न सकिन्छ। सरकारले सोझै उत्पादक कम्पनीसँग औषधि खरिद गर्छ र अस्पताल फार्मेसीबाट बिक्री गर्छ।’ मन्त्रिपरिषद्ले उनको यो योजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै समिति गठन गरेको छ।
लामो समयसम्म उपचार गराइरहनुपर्ने र उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने मिर्गौला, क्यान्सर, मुटु, मधुमेहजस्ता रोगका औषधि, उपचार र परीक्षण शुल्कमा मनोमानी छ। औषधिमा २२ सय प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्ने गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सो अध्ययनले बजारमा ५० हजार (अधिकतम मूल्य) रुपैयाँ रहेको औषधि सरकारले उत्पादक कम्पनीसँग आफैँ खरिद गरे ९ हजार सात सय १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न सकिने देखाएको छ।
आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको यस्तो ब्रह्मलुट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक देखेको होइन, तर मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले यो लुटतन्त्रमाथि लगाम कस्ने साहस देखाएको छ। जुन तारिफयोग्य छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएका विकृतिका एेँजेरु फाँड्ने काम त्यति सजिलो छैन। मन्त्रालयले मूल्य नियन्त्रण गर्ने र आफैँले किनेर भए पनि नागरिकलाई सस्तोमा औषधि दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन भन्ने कुरा यो निर्णयबाट आत्तिएका आयातकर्ताहरुको व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ। भाषा र शैली जुन प्रयोग भए पनि ‘लुट्न पाउनुपर्छ’ भन्ने आशयको उनीहरुको माग स्वीकारयोग्य छैन।
सरकारले मूल्य नियन्त्रण गरे औषधिको अभाव सिर्जना गर्नेसम्मको गैरजिम्मेवार चेतावनी आयातकर्ताहरुले दिएका छन्। औषधिको अभाव सिर्जना गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले अपराधी सरह व्यवहार गर्ने मन्त्री थापाले प्रस्ट पारिसकेका छन्। यो अभिव्यक्तिले औषधिको मूल्य नियन्त्रणमा मन्त्री थापा प्रतिवद्ध छन् भन्ने देखिन्छ। सरकारले यो योजनालाई तुरुन्तै अघि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
यो एक क्षेत्रको कुरा भयो। यहाँ विकृति अनेक छन्। एकै प्रकारका रोगको उपचार र परीक्षणमा अस्पतालपिच्छे फरक–फरक मूल्य छन्। डाक्टर अनुसार उपचार पद्दति भिन्न भेटिन्छन्। कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि भिडाउने, प्याथोलोजी र रेडियोलोजी परीक्षण गराउने र लामो समयसम्म अस्पतालमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ। जसका कारण अधिकांस बिरामी निको भएर अस्पतालबाट बाहिरिँदा ऋणले थला परेका हुन्छन्।
सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन उपचार, शल्यक्रिया, औषधि, रेडियोलोजी तथा ल्याव परीक्षण आदिमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण जरुरी देखिएको छ।
संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रस्ट उल्लेख छ। अन्य विषयमा ठगिएको महसुस भए आवाज उठाउने व्यक्ति पनि अस्पताल पुगेपछि निरीह हुन्छ। आफ्नो वा आफन्तको रोग निको पार्न जुन हदसम्म पनि सम्झौता गर्न वाध्य बन्नुपर्छ। उसले न उपचार शुल्कमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्छ, न औषधिमा। डाक्टरको कुरा त कसरी काट्न सकिन्छ र।
बिरामी पक्षका निरीहता, वाध्यता र कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा बग्रेल्ती भेटिन्छन्। यसको अर्थ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा इमान्दार व्यक्तिको अभाव छ भन्न खोजिएको होइन। तर, भएका इमान्दारहरुले पनि यी बेथिति टुलुटुल हेरिरहेका छन्। विकृति थाहा पाएर मौन बसिदिनु पनि अर्को समस्या होइन र? उनीहरुले अनुभूत गर्नैपर्छ कि, मौन रहनु पनि लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
समग्र उपचार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा छुट्टै स्वतन्त्र शक्तिशाली निकाय बनाउन जरुरी छ। जुन निकायले उपचार, परीक्षण शुल्क र अस्पतालको गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न सकोस्। उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै बिरामी पक्षले अस्पताल र डाक्टरमाथि जाइलाग्ने गरेका घटना दोहोरिरहेका छन्। यसको मारमा कतिपय अवस्थामा निर्दाेष डाक्टर र अस्पताल पनि परेका छन्। आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिन दिन शक्तिशाली निकाय जरुरी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति नियन्त्रणमा आफ्ना तर्फबाट प्रयास जारी राखेका छन्। त्यो उनले गरेका निर्णय र कामहरुबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ। तर, उनका योजना र निर्णयहरुले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको भने देखिँदैन। उनी एक्लैको प्रयासले सम्भव पनि छैन। त्यसैले सरोकारवाला पक्षहरुले उनीसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ।
औषधिमा अचाक्ली मूल्य असुल्दै आएका आयातकर्ताहरु नै धर्नामा